Itinye n'ọkwa preheating ịgbado ọkụ automotive transaxle
Home / ngwa / Nkọwa na-aga n'ihu / Itinye n'ọkwa preheating ịgbado ọkụ automotive transaxle
Category: Nkọwa na-aga n'ihu Tags: akpakanamde preheat ịgbado ọkụ, induction post ịgbado ọkụ, nkwalite mgbakwunye mbido, ntinye usoro ịgbado ọkụ preheat, induction preheater, nkwalite ịmalite ịmalite, induction preheating ụgbọala, induction weld preheating, mgbado ọkụ
ebumnobi: Iji kpoo ọkụ 3.6 ”(91 mm) na mpụga nchara nchara na ntanetị atọ na 662 ºF (350 ºC) na ntanetị ọ bụla na-ewe iwe ọkụ na sekọnd ise
ihe: Onye ahịa nyere 3.6 ”(91 mm) OD nchara axle
Okpomọkụ: 662 ºF (350 ºC)
Frequency: 121 kHz
Ngwa: DW-HF-45kW 50-150 kHz induction usoro oku eji ya na ebe di oku di omimi nke nwere ihe ntinye 1.0 μF nke nwere ihe omuma
- A otu ọnọdụ esịtidem mụụrụ induction kpo oku haziri ma mepụtara kpọmkwem maka ngwa a.
Itinye n'ọkwa Preheating Usoro: A na-ese axel nchara ahụ na ọnọdụ okpomọkụ na-egosi agba na thermocouple jikọtara na akụkụ ahụ. E debere eriri ọkụ ọkụ na-eme ka ọ banye n'ime axel nchara ma gbanye ọkụ. Approachzọ a mere ka eriri ahụ dị ọkụ na 662 ºF (350 ºC) n'ime sekọnd ise dịka onye ahịa chọrọ. Enwere ike inye mmemme maka ịgbanyụ mgbe achọrọ oge kpo oku - sekọnd ise na nke a. Mgbe ahụ, eriri igwe ahụ nwere ike ịkwaga na eriri weld nke abụọ, na akara weld nke atọ.
Nsonaazụ / Uru Usoro: Site na eriri igwe dị n'ime axle ahụ, ọ naghị abanye n'ụzọ, ọ ga-enwe ike ịkwaga ya na eriri weld ọzọ.
- Ọsọ: Ntinye na usoro a chọrọ ka e wee mee ka eriri weld dị ọkụ n'ime ọnọdụ ezubere iche
- Nnwale nyocha ụlọ ọrụ n'efu: Nke a bụ ọrụ ọhụrụ maka onye ahịa, yana nyocha HLQ Lab Service Request nyeere onye ahịa aka
nwalee ngwa ha ma uzo ohuru emere
induction preheating aluminum wiil maka ịgba sere
Ogwe Ogwe Mpempe Ntughari